KDE kacha ọhụrụ dị: KDE 4.7.2 | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux, Noticias
Nyaahụ, Ọktoba 5, 2011, KDE, KDE 4.7.2 nke ọhụrụ a wepụtara.
Ọzọ, mmelite a nwere naanị mmezi ahụhụ na ndozi ntụgharị, yabụ mmelite si KDE 4.7.0 ma ọ bụ KDE 4.7.1 na KDE 4.7.2 kwesịrị ịga nke ọma.
Iji budata ma wụnye ya, gaa na ozi peeji nke a version, ma ọ bụ site na ebe nbudata, na n'oge ahụ enwere naanị ngwugwu pụrụ iche (ya bụ, nchịkọta meta) maka OpenSuse, agbanyeghị… n'oge a ọ dịlarị na gọọmentị ArchLinux repos, so… imelite !!! LOL !!!
Ihe kachasị ọhụrụ ma ọ bụ nke ekwesịrị ikwu, bụ mmelite emere na ụlọ ọhụrụ ahụ Kontact, ndozi banyere nke ahụ ugbu a ọ ga-eji ọtụtụ ihe Akonadi.
Onweghị ihe ọzọ ị gbakwunye, n'ihi na mgbanwe ndị ahụ bụ naanị mmezi ahụhụ, n'ezie na ọkwa ọkwa Mmepe na-ekweta na ọ bụghị ọbụna Changelog dị ugbu a, na maka ndepụta zuru ezu nke mgbanwe anyị ga (anyị onwe anyị, ndị ọrụ) chọọ ndepụta a na Git.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » KDE kacha ọhụrụ nke KDE dị: KDE 4.7.2
Uff ... n'etiti VLC, MPlayer, SMPlayer na ugbu a KDE4.7.2, isi zuru oke na kernel ọhụrụ (linux-3.0.6-1) Enwere m ihe dịka 190MB iji melite, echere m na m ga-echere ruo izu ụka, nke bụ mgbe njikọ ahụ ka mma na ebe ahụ ọ dị na m ga-emelite ^ _ ^ U
Na Kubuntu anyi kwesiri ichere, nri? XD dị ka mgbe niile, Canonical agbahapụla anyị ... ka anyị hụ ma Kubuntu nwetere batrị ntakịrị n'ihi na ha nwere nsogbu na nkwakọ ngwaahịa KDE (na ha adịchaghị mma, rịba ama).
Ihe ọma banyere Ubuntu bụ PPAs. Ekwenyesiri m ike na mmadụ enweworị ụdị KDE ahụ.
M na-agba gị ume ka ị nwaa oghere-kde. Anọ m na-agbasi ike n'iji kde na debian na ọtụtụ ụdị ya na mgbe ọnwa nke ule gasịrị, na-agbaso nkuzi na ndụmọdụ ..., wdg, agbalịrị m ịmeghe na ... uff, ọ dị ka iwepụ anya mkpuchi, enweghị agba na arụmọrụ (ya na kde ghọtara). Ma ọ dịkarịa ala maka m, anaghị m emekọrịta na Linux, mana enweghị m oge dị ukwuu iji gaa njikarịcha na idozi abụọ ọ bụla site na atọ. Ọ bụ nhọrọ ọzọ, ọ naghị afụ ụfụ ma anyị chọọ ụzọ ndị ọzọ.
Zaghachi ka rvl
Agbalịrị m KDE na OpenSuse, mana achọpụtara m, ọ dịkwa oke nwayọ ... na Arch ọbụlagodi na Debian ahụrụ m na ọ na-arụ ọrụ karịa mmiri. Ọ bụ ezie na o doro anya, ọ bụrụ na ị nwere Corei7 na 4GB nke DDR3 RAM echeghị m na ị nwere nsogbu Batman.
Hahahaha n’enweghi ike kde dị na distros kachasị njọ «archlinux, gentoo, slackware» ezi kde na gburugburu desktọọpụ ọ bụla, kedu ka ndị ọjọọ ahụ si dị njọ.
Onweghi onye kwuru na ha dị njọ. Nsogbu m chere bụ na KDE na-ebuwanye ibu na ndị ọzọ n'ihi ọtụtụ ihe ha tinyere iji mee ka ọ nwekwuo omume enyi.
Gnome achịcha: ihe ntinye ngwa ọhụrụ